Ku rakib TP-LINK TL-WN725N (v2) adabtarada mini Wifi ee Arch Linux iyo Ubuntu 12.04+ | Laga soo bilaabo Linux
Ku rakib TP-LINK TL-WN725N (v2) adabtarada mini Wifi ee Arch Linux iyo Ubuntu 12.04+
Dhawaan, cabbiro yar yar oo ah adapters-ka isku xiraya wi-fi ayaa suuqa soo galay, oo aan ka weyneyn dongle-ka Bluetooth ama qadaadiic yar, oo aad u caqli badan oo wax ku ool u ah in lagu isticmaalo laptops-ka aan lahayn kaarka wi-fi isku dhafan (ama leh horeyba waxyeello u soo gaadhay) ama xitaa kombiyuutarada desktop-ka. Cabirkooda oo aad u yar awgood, kama tirtirto wax-soo-saarka USB-yada ee ag-yaal iyo qiimahooda (qiyaastii 12-15 USD) waxay ka dhigeysaa iyaga beddelayaal aad u fiican si loo siiyo isku-xirnaanta wi-fi ee qalabkayaga.
Moodel u muuqda xooggiisa iyo qiimaheeda ayaa ah TL-WN725N(v2) laga bilaabo TP-LINK, oo asal ahaan ka soo muuqday qaybtiisa koowaad (v1) qalabka Realtek RTL8188 ku waxaana la abuuray darawal si fiican uga shaqeeyay distoorka Raspbian (oo ku saleysan Debian) oo loo sameeyay mashiinnada yaryar ee loo yaqaan 'Raspberry mini'; laakiin digniin la'aan waxay u beddeleen qalabkii qalabka RTL8188 ee nooca labaad (v2) iyo Realtek waxay u sameeyeen darawal u dhashay Linux laakiin waxay u fiicnaadeen noocyada kernel 3.3 wixii ka dambeeya, iyagoo ka tagaya Raspbian iyo Crunchbang, iyo kuwa kale.
Nasiib wanaag nooca 2 ee TL-WN725N waa midka loogu qaybiyey inta badan Latin America, nambarkiisa aqoonsigu waa: 0bda: 8179 Iyo bulshada horumariyaha waxay ku guuleysteen inay darawalka si guul leh ula qabsadaan qaybinta ugu caansan Linux, markan waxaan ku rakibaynaa Arch Linux iyo Ubuntu 12.04 (11.10 wixii ka dambeeya):
Fur terminal oo ku cusbooneysii nidaamka: sudo pacman-Syu
Ku xir qalabka TL-WN725N dekedda USB-ga.
Terminalka ku rakib xirmada wadaha adoo maraya AUR: yaourt -S dkms-8188eu
Wax ha ka beddelin faylasha wax lagu kaydiyo oo ha u oggolaan Yaourt inuu soo dejiyo, isku soo uruuriyo, ku dhajiyo oo uu ku rakibo darawalka oo aad u qaabeyso
Dhamaadka waxaad ogaan doontaa in adabtarada wi-fi uu laydhkiisu buluug yar yahay, dib u bilaabayo qalabka waana taas.
Waxay kuxirantahay jawigaaga desktop, iskuxirka shabakada ee barxad-howleedka ayaa kuu sheegi doona in shabakadaha wireless-ka la heli karo.
On Ubuntu (11.10-12.04-12.10-13.04):
Fur terminal oo cusboonaysii / rakib GIT: sudo apt-get rakib – dib u cusbooneysii qalabka muhiimka u ah dhismaha
Ka dejiso darawalka GIT: git clone git: //github.com/liwei/rpi-rtl8188eu.git
Tag galka meesha lagala soo degay: cd ~ / rpi-rtl8188eu
Soo uruuri: dhigi
Ku rakib: sudo samee
Sawir ka qaad qaybaha: sudo depmod -a
Cusboonaysii xusuusta yar yar: sudo update-initramfs -u
Ku shub cutubka cusub xargaha: sudo modprobe -v 8188eu
Ku xira adabtarada wi-fi dekedda USB-ga laga heli karo.
Dhamaadka kiiskan uma baahna inay dib u bilaabaan qalabka, iyaga oo shabakada ka kicinaya Maareeyaha Shabakada isla markaana mar kale dhaqaajinaya, waxay ogaan doonaan in buluugga hogaaminaya ee loo yaqaan 'adapter mini' uu daarmayo oo ay haddaba jiri doonto isku xirnaanta wi-fi.
Nooca 1 ee adabtaradan (RTL8188 ku) - haddii aad halkaas ka heshay - waxaa jira xirmo .deb ah (oo loogu talagalay nooca kernel 3.4 iyo wixii ka dambeeya) oo si dhib yar u rakibaya darawalka, wuxuu si guul leh ugu shaqeeyaa Ubuntu 13.04 iyo Debian 7, halkan ka degso: Darawal TP-LINK TL-WN725N (v1 rtl8188cus)
Waxaan rajeynayaa in xogtaan ay anfacdo adiga, iyo salaanta dhamaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku rakib TP-LINK TL-WN725N (v2) adabtarada mini Wifi ee Arch Linux iyo Ubuntu 12.04+
Waxaan u maleynayay in TP-Link uu beddelayo chipset aan la jaan qaadi karin Linux, laakiin waa ku mahadsan tahay wanaag ma ahayn.
Waxaan u arkaa inay aad u faa'iido badan tahay, waxaan haystaa nooca 1 oo waxay i siisay dhibaatooyin Crunchbang 11. Kuwa u baahan xiriirkan waxaad arki kartaa sida loo rakibo Kernel 3.2, oo lagu tijaabiyay Debian Wheezy. Ha u arkin inay yihiin spam 😉 https://manraog.wordpress.com/2013/06/30/solucionar-problemas-con-adaptador-wi-fi-realtek-rtl8188cu-tl-wn725n-v1-ew-7811un-en-linux/
Waad ku mahadsantahay wadaagida xalkaaga kuwa haysta nooca 1, aad waxtar badan.
Hagaag, waxaan hayaa anteeno wifi USB ah oo uu kujiro adabtarada anteeno kale oo dibada ah isla markiibana way i garataa.
Waa run. Waxaa intaa dheer, cusbooneysiinta Wheezy 7.1 waa inay mar hore aqoonsataa in Wi-Fi anteeno aan wax dhibaato ah qabin, maadaama darawalkaas lagu daray.
Laakiin sidee baan u sameeyaa apt-get haddii si sax ah waxa aan isku dayayo inaan rakibo ay tahay inaan awoodo inaan ku xirnaado internetka ??? Haddii aan samayn lahaa qalab ku habboon waan dhammeyn lahayn xD
Ku jawaab Dérsir
Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in kombiyuutarka ay tahay inuu ku xirnaado shabakad internetka laga heli karo iyada oo loo marayo fiilada ethernet, ama haddii aysan suurtagal ahayn in lagu soo dejiyo darawalka kombiyuutar kale oo lagu soo ururiyo gacanta kumbuyuutarka iyada oo aan la xiriirin. Duh.
Waad salaaman tihiin, anigu aqoon badan uma lihi mowduuca, laakiin sidee baan ugu sameeyaa Android 4.2.2? Farxad!
Haddii aad isticmaaleysid Android kumbuyuutarka nooca yar ee loo yaqaan 'Raspberry type' waa inaad ku soo uruurisaa darawalka gacanta maxaa yeelay Android waxay leedahay kernel xiran oo wax laga beddelay cidda rakibtay, haddii ay tahay kaniiniga waa inaad ka hubisaa soo-saaraha haddii diirku u oggolaado wax ka beddelidda adeegsadaha ee ku-hagaajinta ama ku rakibidda softiweerka saddexaad. Sikastaba xaalku ha ahaadee, way fiicnaan laheyd inaad adeegsato nidaam kale oo aad u furan oo kuu ogolaanaya inaad rakibto darawalka adigoon duulin ama jabin rukhsadaha Android si aad wax uga beddesho kernel-ka.
Xitaa anigoo nin dad ah, waxaan ka dhigay wax shaqeynaya.
Si fiican ayaad u sharaxday oo aysan macquul aheyn in la qaldamo.
Hambalyo oo sii wad.
Ku jawaab Motorhome
Way ii shaqeysay ubuntu 12, laakiin ubuntu 13 waxay siisaa qalad sameynta.
Madashan http://peppermintos.net/viewtopic.php?f=8&t=5619 Waxay sharxayaan sida loogu sameeyo Ubuntu 13.04. Asal ahaan talaabooyinka 2 iyo 3 ayaa isbadala, ka taga:
2) git git git: //github.com/lwfinger/rtl8188eu.git
Waad ku mahadsantahay fikradaada, sida muuqata waxay sidoo kale ku soo rogeen nooca darawalka lwfinger ee GIT si ay ula qabsadaan cusbooneysiinta kernel ee Ubuntu 13.04 (3.8 wax). Qodobkaan waa nooca lwei laakiin ficil ahaan waa isku mid.
Aad baad u mahadsantahay! Tallaabooyinka ku yaal boostada aniga ima aysan shaqeynin maxaa yeelay adabtaradeydu waa nooca v3.0, laakiin habkaaga ayaa lagu xalliyay! Labadaba waad ku mahadsan tahay!
SHAQADA KU SAABSAN OSHADA HOOSE.
Ku jawaab Santiago Leon
Waa wax laga xumaado laakiin waxay iiga shaqeysay Ubuntu 12.04 laakiin ma ahan Mint 13. Waxaan u maleynayay inay la mid tahay waraaqo kala duwan
Mint hadda waa ka Debian badan tahay Ubuntu, markaa ma shaqeyneyso.
Aad u fiican Marka hore waad ku mahadsantahay macluumaadka.
Ubuntu 11.10 aniga ayey ii shaqaysaa way shaqaysaa, laakiin, haye, kombiyuutarka waan damiyaa oo waan shidaa markale wifi-na kuma dhex tuuro USB-ga.
Marka, markaan arkay wixii aan arkay, waa inaan dib ugu noqdaa tillaabooyinka laga bilaabo qodobka 4, taas oo ah, in la soo ururiyo, la rakibo, la cusbooneysiiyo kernel-ka, la rakibo moduleka, iwm.
Waa inay jirtaa wado ay kusii nagaan karto sanadwalba iyo darawalka oo lagu rakibayo inta kale ee wadayaasha ah marka OS-ga uu rarayo.
Wax gacan ah oo ku saabsan arrintan?
Dhibaatada Ubuntu ayaa ah in cusbooneysiin kasta oo kernel ah waa inaad mar labaad rakibtaa darawalka, maxaa yeelay wuxuu tirtirayaa kii hore halka markii horeba lagu rakibay. Isku day inaad ku rakibto qalabka ku xiran bilowga, iyo haddii ay sii wado wax la mid ah markasta oo aad dib u bilowdo kumbuyuutarka, cusbooneysii 12.04 LTS adiguna dhibaatadaas ma yeelan doontid.
Saaxiibbo habeen wanaagsan, waxay noqon doontaa in qof garanayo sida loo caawiyo, waxaan raacayaa dhammaan tillaabooyinka laakiin laga bilaabo maanta oo aan u beddelayo 12.04LTS aniga ima shaqeyso aniga iyo haddii aan ku sameeyay 13, mar hore ayaan isku dayay waana haystay qalad ma leh laakiin markay timaado aqoonsiga qalabka ma shaqeynayo. Ma aqaano waxa aan qaldayo, horay ayaan ugu mahadcelinayaa kaalmadaada.
Sameynta sameynta waxay i siisaa qalad. Waxaan dhajiyaa waxa ka soo baxa terminalka.
cc1: digniinta qaar loola dhaqmo sidii qaladaad
samee : *** [/home/cristian/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.o] Khalad 1
samee : *** [_module_ / home / cristian / rpi-rtl8188eu] Khalad 2
samee : ka bax galka "/usr/src/linux-headers-3.8.0-35-generic"
samee: *** [modules] Khalad 2
Waxaan ka jawaabayaa inaan balaariyo.
samee ARCH = i386 CROSS_COMPILE = -C / liib/modules/3.8.0-35-generic/build M = / home / cristian / rpi-rtl8188eu modules
samee : gali galka "/usr/src/linux-headers-3.8.0-35-generic"
Faylka waxaa kujira /home/cristian/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.c:23:0:
/home/cristian/rpi-rtl8188eu/include/osdep_service.h: Shaqada 'thread_enter':
/home/cristian/rpi-rtl8188eu/include/osdep_service.h:1397: 2: qalad: si cad u sheegida waxqabadka 'daemonize' [-Werror = muujinta-shaqeynta-cadeynta]
Waxaan helay tan:
xididka @ misterdixon-HP-Pavilion-dv6000-GA384UA-ABA: ~ / rpi-rtl8188eu # samee
samee ARCH = i386 CROSS_COMPILE = -C / liib/modules/3.8.0-36-generic/build M = / root / rpi-rtl8188eu modules
samee : gali galka "/usr/src/linux-headers-3.8.0-36-generic"
CC [M] / xidid/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.o
Faylka waxaa kujira /root/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.c:23:0:
/root/rpi-rtl8188eu/include/osdep_service.h: Ficil ahaan 'thread_enter':
/root/rpi-rtl8188eu/include/osdep_service.h:1397: 2: qalad: cadeyn cad oo ku saabsan waxqabadka 'daemonize' [-Werror = muuqaal-shaqo-cadeyn]
samee : *** [/ xidid/rpi-rtl8188eu/core/rtw_cmd.o] Khalad 1
samee : *** [_module_ / xidid / rpi-rtl8188eu] Khalad 2
samee : ka bax galka "/usr/src/linux-headers-3.8.0-36-generic"
Fadlan iga caawi inaan haysto laba toddobaad aniga oo aan awoodin inaan rakibo.
Hello Misterd ka hubi xiriiriyahan http://linuxforums.org.uk/index.php?topic=11065.0 Waxaan lahaa qalad la mid ah kanaga, waxaan raacay talaabooyinka waxayna si fiican ugu shaqeysay Ubuntu 13.04 kernel 3.8.0-19. Salaan.
Waad salaaman tihiin, nasiib daro habkaasi aniga ima shaqeynayo maxaa yeelay isagoo waxyeelloobay kaarka wifi kaarkiisa waxba kama soo dagsan karo maxaa yeelay ma lihi internet.
Waxaan ka soo dejiyey darawalka git ilaa xusuus, laakiin aniga ima rakibto maxaa yeelay ma lihi GIT-kayga nidaamka Ubuntu sidaa darteed macquul maahan.
Waxaan hayaa adabtarada wifi ee nacaladda ah qaybta 2 laakiin uma heli karo inay ku shaqeyso si uun.
Halkan waxaan ku dagaallamayaa wax badan, laakiin kuwa aan khibradda lahayn ama aqoonta yar u leh Linux, waa odyssey maaddaama aysan internet lahayn oo aysan u adeegsan xarumaha software-ka inay wax ku rakibaan, maxaa yeelay midkoodna ma tiirsanaanta ama waa inaad dhigtaa tiro amarro ah (isku soo ururi, ku rakib iyo waxyaabo kale).
Haddii kaliya kuwa aan doonaynin in badan xakamaynta OS la siin karo ikhtiyaarka, waxaan u maleynayaa in Linux ay wax badan ka fogeyn lahayd oo kuwa aan khibradda lahayn ay si tartiib tartiib ah u noqon doonaan "khabiir" oo ay bilaabi doonaan inay sahamiyaan dhammaan Linux caalamka.
Ma aha in la xuso in ay qaadatay waqti dheer in la yeesho ciyaaro heer xirfadeed ah, kaliya 2014 sida Cry Engine ayaa taageero u heli doonta Linux.
Ma rumaysan karo sida nidaamka Linux ku saleysan sida Android uu adduunka oo dhan caan uga yahay taleefannada gacanta, kiniiniyada, iyo aaladaha kale.
Laakiin haye, waxaan u baahanahay caawimaad haddii ay suurtagal tahay in lagu rakibo darawalka aaladda wifi ee Ubuntu.
Celceliska Windowslerdo, ku qaraqmidda galaas biyo ah waa wax maalin walba socda. Waad badbaadin laheyd dhibaato la'aan dhibaatada cad ee had iyo jeer aan faa iidada lahayn ee ah "Linux waxay qaadan laheyd waxbadan hadii ay sahlanaan laheyd" iyo hadii ayeeydaadu giraangiro leedahay, hubaal waxay ahaan laheyd baaskiil. Haddii aadan ka rumaysan karin wax ku saabsan Android, laakiin aniga ayaa ixtiraamaya: caddaynta iyo curyaaminta daaqadaha maskaxda ee maskaxda ayaa la caddeeyay. Baro sida ugu badan ee aad kari karto, Linux waa bilaash si hufan sababtaas darteed: sidaa darteed dadka aan aad u iftiimin waxay wax ku baran karaan xawaarehooda iyo heerkooda, waa nidaamka qalliinka inaad adigu u sameyso sidaad rabto, ee ma ahan inaad wax walba ku dhammayso. Oo hadaadan jeclayn, wali waa windowslerdo oo hada, imaatinka blog-ka Linux inaad ooydo runti waa u qoslaysaa daawadaha laakiin aad bey uxun tahay inuu ka fiirsado. Waxaad dhib ku qaadan laheyd inaad geliso nooca Ubuntu ee aad isku dayday inaad rakibto darawalka waana ku caawin karnaa, boostadani waxay ku dhowdahay 2 sano ka hor waxaana jiray isbadalo badan oo adduunka ah, ma ahan midaas maskaxdaada laakiin dhamaan Caalamka haray haa. Adaa mudan.
Laptop-kaaga miyuusan lahayn dekedda Ethernet? Ilaahow naga caawi, sida ugu dhaqsaha badan ee aan ku ogaado inaad ka cabaneyso inaadan internet geli karin maxaa yeelay wifi-gaagu ma shaqeynayo ... Waan ka qosli doonaa halkan illaa 3-da maalmood ee soo socota. Iga raali noqo.
Doqonnimada bini aadamka ma taqaanno soohdin. Runtu waxay tahay inaysan macquul aheyn in la soo bandhigo fikrad ama faallo adigoon ka soo bixin kuwa difaaca sare ee Linux kuwaas oo iyagu aaminsan inay yihiin dhaqaatiir kumbuyuutar ah oo Linus Torvalds ka dhigaya inuu u ekaado wiil 4 jir ah. Runtu waxay tahay inaad bilowdo inaad ka tagto sayniska kombiyuutarka xoogaa oo aad qaado koorso ballaadhan oo horumarsan oo ku saabsan xiriirka aadanaha si aad u aragto in halkii aad ka xumaan lahayd oo aad muujin lahayd "xigmaddaada weyn" aad caawin doonto kuwa baahan. Haddii aan ku soo galay madashaan sababta oo ah nooca Ubuntu ee aan haysto waa sida saxda ah haddii aan idhaahdo ma lihi internet waa wax aan ahayn sababtoo ah waxaan ahay doqon aan ka warqabin fiilada shabakadda laptop-ka, waxaan u haystaa sida pc desktop iyo anigu ma haysto fiilo shabakadeed oo ku filan oo aan ku gaadho, inkasta oo taasi aanay adiga dan kuu ahayn maadaama aad ku dhex jirto xuubkaaga aqooneed oo aadan qiraynin inay jiraan kuwo kale oo aad aaminsan tahay inay "ka liitaan." Sikastaba adiga oo isla weyni ku tihiin noobs ama windoslerdoz sidaad ugu yeerto wax kaa tari maayo. Waxaan doorbidi lahaa qof aan aqoon sida ugu badan ama ugu yaraan aan sidaaduba u iftiimin laakiin isku dayay inuu ku caawiyo. Waad ku mahadsan tahay (adiga "waad soo dhaweyneysaa").
Waa run, doqonnimada aadanaha ayaa aad u xun oo darawalna kuma rakibi kartid Ubuntu! Ilaahow noo gargaar. Waad soo dhoweyneysaa, kaalay marka aad jeceshahay inaad baashaashid.
Waxaan isku dayayaa inaan ku caawiyo markaa:
1. Laabtop-kaaga weyn oo culus ka saar miiskaaga.
2. U soo dhawaaw routerka ama modemka ku siinaya internetka (waa sanduuqa ay ku yaalliin laydhadhkiisu yar yihiin)
3. Ku xir fiilada RJ45 Ethernet dekedda laptop-kaaga, iyo sidoo kale dekedda ethernet ee bilaashka ah ee routerkaaga ama modem-kaaga. Qaado waqtigaaga.
4. Xaqiiji inaad internet ku leedahay Ubuntu taskbar, digniin ayaa kuu soo muuqan doonta taas oo kuu sheegaysa in shabakada siliggu ay isku xidhan tahay. Hadday u muuqato, si wanaagsan baad u shaqaysaa.
5. Ku rakib GIT kombiyuutarka sida lagu sharaxay tillaabada 1 ee tilmaamaha.
7. Isku day inaad si taxadar leh u raacdo tilmaamaha, qaado waqtigaaga, waxay noqon kartaa ilaa 4 maalmood laakiin waxaa hubaal ah inaad guuleysan doontid.
8. Waa lagaa mudan yahay.
Waan ka xumahay inaan beddelo amarka tilmaamaha, waxaan ka booday kii 6. Qosolku wuxuu ka xoog badnaa higgaaddeyda, laakiin waxaad raaci kartaa tilmaamaha si kalsooni buuxda leh, hubaal way ku caawin doontaa.
Waxay u shaqeysay si qumman, laakiin koodhku wuxuu bixiyaa qalad markii la uruurinayay. Noocaan kale wuxuu soo uruurinayaa kaamil, hase yeeshe
Waad ku mahadsantahay adoo cusbooneysiinaya keydka.
Aad baad u mahadsantahay…
Wax ku biirinta wanaagsan darawalka rtl8188eu wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa ubuntu 12.04 64bits.
Jawaab Gustavo Arlex
Ibraahim Zenteno dijo
Waad salaaman tahay sida wanaagsan ee macluumaadkaagu wax badan ii caawiyey Waxaan isku dayayaa inaan ku rakibo qalabka aaladda os luna ee aasaasiga ah oo ku saleysan ubuntu 12.04, nooca kernel-ka waa 3.2.0-61-generic-pae, dhibaatada i haysata ayaa ah Waxay horey u ogaatay aaladda laakiin aniga macquul iima ahan inaan u dhaqaajiyo si aan u baaro shabakadaha bilaa-waayirka ah isla markaana aan isku xiro waxaan rajeynayaa inaad iga caawin karto mahadsanid:
la xiriir iwconfig natiijada soo socota
naanaysta aan xidhnayn ee wlan0: »»
Qaabka: Joogtaynta Tooska ah = 2.412 GHz Goobta Helitaanka: Lama Xiriirin
Iskuday: ka bax RTS thr: off Fragment Fra: off
Furaha sirta: dansan
Maareynta Awoodda: off
Xiriirka Tayada = 0/100 Heerka calaamadaha = 0 dBm Heerka sawaxanka = 0 dBm
Rx aan sax ahayn nwid: 0 Rx aan sax ahayn oo crypt: 0 Rx aan waxtar lahayn frag: 0
Tx retries xad-dhaaf ah: 0 misc aan sax ahayn: 0 nal la seegay: 0
Jawaab Abraham Zenteno
Waad salaaman tahay, waxaan doonayay inaan ku rakibo adabtarada miiska loo yaqaan 'raspberry pi' ee leh arkOS (taas oo ah mid ka soo jeeda archlinux) laakiin ma awoodo (ama ma aqaano sida loo rakibo dkms), waxaan isku dayay pacman laakiin waan kari waayey soo hel baakadka, ma aqaano haddii ay lagama maarmaan noqonayso in la sameeyo foomka la midka ah yaourt-ka sida halkan lagu muujiyey http://archlinux.fr/yaourt-en . Haddii qof i caawin karo aad baan u mahadcelinayaa
Waa inaad marka hore rakibtaa Yaourt si aad u isticmaasho dkms-ka, xirmadu waxay ku jirtaa keydka AUR oo Yaourt si fudud ayaa loogu rakibay.
Cashar bixin heer sare ah! Waxaan hadda ku rakibay adabtaradan wifi-ka mashiin hore oo dib loogu soo nooleeyay Linux. Mahad badan!
Mar labaad waad salaaman tihiin! Waxaan eegay bogga GitHub ee keydka darawalkan waxaanan la kulmay fariintan:
«Repo-kan waa la duudsiyey, fadlan goto https://github.com/lwfinger/rtl8188eu wixii ku soo kordha mustaqbalka. »
Sidaa darteed waxaan u maleynayaa in wax ka beddelka lagu sameeyo tallaabada 2 (hirgelinta Ubuntu) ka dibna la sii wado inta kale, sax?
Waxaan rabaa in aan cadeeyo in darawalkii hore uu wali shaqeynayo laakiin aniga waxay ila tahay inay fiicnaan laheyd in wax laga badalo keydka si looga warqabo cusbooneysiinta suurtagalka ah.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa wax ku biirintaada, waxaan rajeynayaa in kuwa xiiseynaya ay akhriyaan dhammaan faallooyinka ilaa taada oo ay hubiyaan cusbooneysiinta keydka GIT, maxaa yeelay maqaalka ayaa durbaba jira hal sano mana fasixi karo mar dambe.
Adapters-ka (TL-WN723N iyo TL-WN725N V2 mini) ayaa horeyba loogu taageeray kernels 3.12, 3.13 (halka ugu fiican ee ay ka shaqeyso) iyo 3.14, marka hadday rabaan waa inay cusbooneysiiyaan kernel-ka mana ahan inay ku rakibaan darawalka, Iyo hal shay oo kale, qalabkani wuxuu ka cunayaa kheyraad badan kombuyutarka ama laptop-ka, waxaan u maleynayaa inay ugu wacan tahay Chipset-ka, in kasta oo ay soo fiicnaanayeen ilaa iyo kernel 3.13+.
Waad salaaman tahay, waxaan ku darsaday wax kale: USB 3.0 dekedaha ayaa ooyi doona, fikrad maleh sababta Oo laguma xallin iyadoo la adeegsanayo nooc cusub oo kernel ah, maxaa yeelay waxaan ku tijaabiyey 13.04 iyo 14.04.
Meel aan fiicnayn oo dukaanku ii soo jeediyay adabtaradan aniga….
ka xumahay jorge June 26, 2014 4:37 PM, TP-link TL-wn725n nano usb wifi adabtarada ayaa kuugu adeegay ubuntu 14.04 lts ee dekedda USB-ga. 2? Dhibaato ayaan ku qabaa muddo dheer oo leh encore n 150 enuwi 1 nx 142, waxaanan rabaa inaan iibsado TP-da kor lagu magacaabay, haddii ay kugula talineyso usb wifi ubuntu. PS: Waxaan haystaa ubuntu oo xigta si aan ugu guuleysto 7.
Cashar bixin aad ufiican oo sifiican u sharaxay talaabo talaabo ah, dhib kuma qabin ka shaqeynta qalabkeyga wifi ee Ubuntu 12.04, hada waan awoodi doonaa inaan sameeyo cusbooneysiinta u gaarka ah, aad ayaad u mahadsantahay, maqaal aad u fiican .. !!! aadna waxtar u leh.
Jawaab Jose Luis Reyes C
taxane serrano ah dijo
Aad baad u mahadsan tahay, tilmaamahaagu waa fiican yihiin.
Ubuntu kuma lihin shabakad laakiin daaqadaha waxaan ka aaday xiriirkaaga git: //github.com/liwei/rpi-rtl8188eu.git wax walbana waxay ku soo dejisteen siib (iyaga ayaa ku siinaya ikhtiyaarka). Ka dib waxaan ka furay fayl ay nuqul ka samayso soo dejinta Linux. Kadib waxaan ka bilaabay talaabada 3.
Mar labaad mahadsanid mashiin
Ku jawaab gonzalo serrano
Dadweynoow, dhibaato ayaan qabaa, aad ayaan ugu cusbahay tan waxaanan u baahanahay caawimaad yar hah
Waxaan haystaa xiaopan on pendrive, waan xirxiraa markaan kombiyuutarka furo, wax walba si fiican ayey u socdaan laakiin, waxaan galaa Beini kaarka wifi-na ima aqoonsana (Waxaan iibsaday TL-WN725N v2). Ma aqaano waxaan sameeyo, waxbadanna ma fahmin maxaa yeelay sidaan horay u sheegay aad baan u cusboonaaday, dhammaan macluumaadka ayaa i caawiya. Waxaan rajeynayaa jawaabo, aad ayaad u mahadsan tihiin asxaabta 😉
Waxaan si guul leh u rakibey TP-Link IC: 8853A-WN725N wireless network interface oo wadaha aaladda Ubuntu 12.04 kernel 3.2.0 adoo raacaya tilmaamahaaga, aad ayaad u mahadsantahay!
Aad baad u mahadsan tahay, waxtar badan bay ii ahayd aniga.
Haye, sidee tahay, waan ka xumahay, waxaan xiiseynayaa inaan soo iibsado mid ka mid ah adapters-kan cusub maaddaama laptop-kayga uusan sifiican ugu shaqeyn wifi, kaarka ayaa dhaawacan, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay ka shaqeyneyso daaqadaha 8.1
Jawaab Marco Olvera
Waad salaaman tahay dhibaato ayaan qabaa oo waxaan jeclaan lahaa haddii aad i caawin karto, waxaan dhawaan ku rakibay Fedora 21 laptop-kayga dell inspairon, waxaa loo qaybiyay daaqadaha 8; laakiin tani dhibaato ayay ku leedahay wifi kuma xirna shabakada sidaa darteed waxay leedahay USB TP LINK TL-WN723N la qabsan karo, hada dhibka jira ayaa ah Fedora ma awoodo ikhtiyaar kasta oo aan kula xiriiri karo internetka, haddii kale maadaama carmalka 8 haddii aqoonsan yahay USB-ga oo waxaan ku dhex mari karaa dhibaato la'aan, waxaan ahay qof cusub oo ku jira Linux guud ahaan waxaanan jeclaan lahaa haddii aad i taageeri lahayd mahadsanid iyo salaan badan.
Miyaad dhejin kartaa sida loo rakibo kaarkan ka furan Open Suse 13.2.
Ku jawaab npinelo
Haye, waxaan hayaa arrinta soo socota
Tp-Link Tl-wn727n antenna:
Baska 003 Qalabka 008: ID 148f: 7601 Ralink Technology, Corp.
Waxaan isku dayay inaan ku rakibo anteenada Windows wireless ka wada, waxaan u maleynayaa inaan ku rakibay darawalkii saxda ahaa (rt2870) maxaa yeelay waa midka ku yimid saxanka rakibida sidoo kale wuxuu garwaaqsanayaa in anteenadu ay ku xirantahay (daaqadaha wireless wireless-ka ayaan ka helayaa) Qalabka hadda: HAA "markay anteenadu ku xidhan tahay. In kasta oo ay taasi jirto, weli ma isticmaali karo Wi-Fi maxaa yeelay ma jiraan shabakado wireless ah oo ku qoran mid ka mid ah maareeyayaasha shabakadda ee aan tijaabiyey.
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa daaqado 7. Waxaan ku rakibay dhamaan wadayaasha dhamaanba talaabooyinka oo ma jiro shabakad i aqoonsan .. Waxaan ku tijaabiyay kumbuyuutar laptop isla goobta ah wuuna i aqoonsaday Sideen ku xallin karaa taas?
Ku jawaab leandro leiva
Waad salaaman tahay, waxaan rabay inaan kaaga digo in xirmada hada loo yaqaan 8188eu-dkms.
Salaan. Ma jiraa qof madasha jooga? Waxaan doonayay inaan arko haddii 723 ama 725 ay ka shaqeeyaan sanduuqa dalwaddii ee barnaamijka Linux si loo baaro shabakaddayda. Hadaad garatid adabtarada USB-ga
Majaladda HD # 8 Waa La Heli Karaa
[Go'an] Ubuntu waxay sudhan tahay bilawga: shaashadda madow / guduud ee dhimashada